I-Wee Haven Retreat-Elliot Lake - I-Airbnb
I-Wee Haven Retreat-Elliot Lake
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMargaret
I-Wee Haven Retreat yiyunithi esanda kulungiswa, eqaqambileyo neyanamhlanje, ezimeleyo ekumgangatho ophantsi yeendwendwe enomnyango osecaleni. Iyunithi ibandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye langoku, indawo yokuhlamba yabucala, kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa yokuhamba. Ikofu inikezelwe, kwaye ukufikelela kwi-WiFi kuyancomeka.
Yonwabela igumbi lokuhlala elibanzi ngeCable kunye neNetflix, okanye upholile phambi kwendawo entle yegesi! Hamba-uphume uye kwigadi ebekwe kakuhle kunye nendawo yakho yomgangatho wabucala ukonwabela ngaphandle !!
Uyakonwabela ukuhonjiswa kakuhle, enkulu kwaye eqaqambileyo, exhotyiswe ngokupheleleyo yeendwendwe kunye nokuhamba ukuya kwindawo yabucala yangasemva kunye neegadi ezigcwele indawo yokuhlala etofotofo entwasahlobo nasehlotyeni.
Indawo ezolileyo, enobuhlobo nosapho.
Sihlala kwiyunithi eyahlukileyo kumgangatho ophambili wendlu evaliweyo. Uya kukhangela ngokwakho usebenzisa ikhowudi engundoqo, ngokungena kwecala. Siyafumaneka kwimibuzo.